Otu esi etinye Python 3.10 na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
Saturday, October 30, 2021 Tọzdee, Septemba 23, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Python 3.10 Iji aka
Python bụ otu n'ime asụsụ kachasị ewu ewu na ọkwa dị elu, na-elekwasị anya na ọkwa dị elu yana ngwa dabere na ihe sitere na mpempe akwụkwọ dị mfe gaa na algọridim mmụta igwe dị mgbagwoju anya. Python 3.10 bụ ntọhapụ kachasị ọhụrụ na agụghị ya ka ọ kwụsiri ike ma e jiri ya tụnyere Python 3.9.
Maka ndị ọrụ yana ọkachasị ndị mmepe chọrọ ịnwale ntọhapụ ọhụrụ Python, ị ga-ama Otu esi etinye Python 3.10 na Rocky Linux 8.
Ọ bụrụ na ịtọbeghị onye ọrụ sudo, jiri iwu a ka ịbanye na mgbọrọgwụ ka ị gaa n'ihu.
Ịwụnye Python 3.10 bụ usoro kwụ ọtọ, ọbụlagodi na ịchịkọta site na isi mmalite. Nke mbụ, ị ga-achọ ịwụnye ihe ndabere dị mkpa iji wuo Python 3.10:
Mara, nke a bụ Python 3.10 ụdị kwụsiri ike; gaa na lelee maka mmelite.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, anyị nwere 2 cores, yabụ na (mee) iwu, anyị na-eji (-j 2).
Python's venv modul bụ ebe a na-ahụ anya bụ ebe Python dị ka onye ntụgharị Python, ọba akwụkwọ, na script etinyere n'ime ya dịpụrụ adịpụ site na ndị e hibere na mpaghara ndị ọzọ mebere, na (na ndabara) ọba akwụkwọ ọ bụla arụnyere na sistemụ arụmọrụ gị, dịka ọmụmaatụ, ndị etinyere na sistemụ arụmọrụ Rocky Linux gị ka ịzenarị ọgụ na ịkpaghasị gburugburu ebe nrụpụta gị.
Iji jide n'aka na etinyere Python 3.10 nke ọma ma na-arụ ọrụ, mepụta ọrụ Python ngwa ngwa dị ka ndị a.
Site na ndabara, ekwesịrị itinye pip 3.10, nke bụ njikwa ngwugwu kacha eji maka Python.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye Python 3.10 maka Rocky Linux 8 wee mepụta gburugburu mebere ngwa ngwa. N'ozuzu, Python 3.10 ka dị mma, yabụ ịrapara na Python 3.9 nwere ike bụrụ ihe na-achọsi ike maka oge a. Maka ndị chọrọ ịnwale Python ọhụrụ, 3.10 kwesịrị itinye ego iji wụnye.
Categories Nkume linux Tags Python, Nkume Linux 8 Mail igodo